Akụkọ - Ihe ngosi nke iri abụọ na abụọ nke Russia na nri 2019
Ihe ngosi nke iri abụọ na abụọ Russia International Exhibition Ngosipụta 2019
Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd keere òkè na ngosi ahụ, na-egosi na ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa na ụlọ ọrụ kacha mma. Dị ka otu n'ime nnukwu oriri ahịa nke agar na carrageenan, ọ bụ nke abụọ anyị ịme onwe anyị ndị ahịa Russia. Anyị na-ebupụ agar anyị na Russia na Ukranie, nnukwu ihe ịga nke ọma bụ na anyị enwetala nkesa nkesa na ndị ahịa Russia na ndị Ukrainie.
Oge ngosi: February 19-22, 2019
Ebe ngosi: Moscow, Russia
Ngosi ngwaahịa: Agar & Carrageenan
Ugbo ala .:B612
Ngosi Okwu Mmalite:
Ndi ITE Group PLC kwadoro UK ihe ngosi Russia (FIR) Ihe ngosi a mere kemgbe 1998, mgbe afọ 20 nke mmepe nke mmiri ozuzo ahụ, ihe ngosi ahụ abụrụla onye kachasị emetụta Russia, naanị nri nri na ihe ngosi ọkachamara ọkachamara, radieshon na gburugburu Soviet Union n'oge gara aga, mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo na Russia, mmepe akụ na ụba na azụmaahịa Russia, nkwado nke gọọmentị gọọmentị gọọmentị nke Russia dịka ndị na-emepụta ihe mgbakwunye nri.
Ruo ọtụtụ afọ, nri abụrụla ihe nnabata ọdịnala dị na Russia, na-aza 1/4 nke mbubata mbata, ọ bụ nke abụọ naanị n'igwe na akụrụngwa na njem njem (na-aza ajụjụ maka 35% nke mbubata mbubata) na ụdị niile ngwaahịa na ngwaahịa. Ndị Russia na-atụkwasị obi na nri a na-ebubata na ndụ kwa ụbọchị, ugbu a, ikike mmepụta nke ụlọ ọrụ ihe oriri nke anụ ụlọ nke Russia erughị 50% nke mkpa obibi mba, yana ihe dịka 90% nke mgbakwunye na ahịa na-esi mba ọzọ. Russia abụrụla ezigbo ahịa maka ngwa ngwa ngwa ngwa.Ma ọ bụrụ na nnukwu onye na-ebupụ nri, ihe oriri na ihe mgbakwunye, China nwere nnukwu uru na arụmọrụ nke Russia, ọnụ ahịa ya na-arịwanye elu kwa afọ. Karịsịa, protein inine, protein soybean, stevia, akwụkwọ nri na ngwaahịa ndị ọzọ bụ ndị ndị na-ere ahịa Russia nabatara.
Granulated shuga na sirop
Products Ihe eji esi nri na desserts
Ats Abụba, abụba nọchiri na mmanụ oriri
● Nchịkọta na nri
● Mmụọ, mmanya na-egbu egbu na mmanya
Products ngwaahịa Soy
Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na mkpụrụ
Cultures Ọdịbendị ndị malitere
● Mmụọ, mmanya na mmanya
● Ndị metụtara ọrụ
Lo Colloids na stachi
● ngwaahịa ọkara